Ekuqaleni Mina nganginesifiso sokukunikeza amaqiniso amaningi, kodwa ngenxa yokuthi umqondo wakho ngeqiniso ubanda kakhulu futhi sinokungakhathaleli, ngivele ngaphonsa ithawula. Mina angifisi imizamo Yami imosheke, noma ngibone abantu bebambelela emazwini Ami kodwa zonke izindawo benza lokho okungiphikayo, bengihlambalaza, futhi bengithuka ngenhlamba. Ngenxa yezimo zemiqondo yenu kanye nobuntu benu, Mina ngimane ngikulethela ingxenye encane yamazwi asemqoka kakhulu kuwe njengesivivinyo Sami phakathi kwesintu. Yimanje kuphela lapho Mina ngiqinisekisa ukuthi izinqumo nezinhlelo engizenzile ziyahambisana nokudingayo, futhi phezu kwalokho, ngiyaqinisekisa ukuthi umqondo Wami ngesintu ulungile. Iminyaka eminingi yezenzo phambi Kwami Mina inginike impendulo engingakaze ngiyithole ngaphambili. Futhi umbuzo kulempendulo uthi: “Ingabe uyini umqondo womuntu phambi kweqiniso noNkulunkulu weqiniso?” Imizamo Mina engiyichithe ngomuntu, ifakazela ubukhona bokumthanda Kwami umuntu, kanti nezenzo nokwenza komuntu phambi kobuso Bami, kufakazele ubukhona bokuzonda iqiniso nokumelana Kwami nomuntu. Ngaso sonke isikhathi Mina ngikhathalela bonke abangilandelayo, kodwa asikho isikhathi lapho labo abangilandelayo bekwazi khona ukwemukela izwi Lami; behluleke bancama ukwemukela ngisho iziphakamiso ezivela Kimi. Yikho okungidumaza kakhulu kunako konke. Akekho namunye okwazi ukungiqonda Mina, nangaphezu kwalokho, akekho namunye okwazi ukungemukela, ngisho nakuba isimo sengqondo Yami ngabo siqotho namazwi Ami emnene. Bonke benza umsebenzi abawunikezwe Yimi ngokuhambisana nezinhloso zabo zasekuqaleni; abafuni nezinhloso Zami, ingasaphathwa eyokuthi babuze izicelo Zami. Basazitshela ukuthi bangisebenzela ngokuthembeka, kodwa bebe bengivukela. Abaningi bakholelwa ukuthi amaqiniso angemukeleki kubo noma lawo abangeke bawenze akuwona amaqiniso. Kulaba bantu abanje, amaqiniso Ami aphenduka abe yinto yokuphikwa futhi ashaywe indiva anganakwa. Ngesikhathi esifanayo, Mina ngibe sengiphenduka lowo otuswa ngumuntu ngomlomo njengoNkulunkulu, kodwa ngibuye ngithathwe njengowangaphandle ongelona iqiniso, indlela, noma ukuphila. Akekho owazi leli qiniso: Amazwi Ami aliqiniso elingasoze laguquka naphakade. Ngiyilowo onikeza ukuphila kumuntu futhi Yimi kuphela oqondisa isintu. Ukubaluleka kanye nencazelo yamazwi Ami akuncikile ekutheni, ngabe ayemukeleka noma ayemukelwa yisintu, kodwa ngobukhona bamazwi Ami uqobo. Noma ngabe akukho namunye umuntu kulomhlaba ongawemukela amazwi Ami, isisindo samazwi Ami kanye nosizo lwawo esintwini alusoze lwalinganiswa muntu. Ngakho-ke, uma Mina ngibhekene nabantu abaningi abangivukelayo, abangiphikayo, noma labo abawedelelayo amazwi Ami, isinqumo sami sithi: Makuthi isikhathi kanye namaqiniso abe ngofakazi Bami futhi akhombise ukuthi amazwi Ami aliqiniso, indlela kanye nokuphila. Makakhombise ukuthi konke engikushilo kulungile, nokuthi ayilokho umuntu okumele agcwaliswe yikho, kanye, nangaphezu kwalokho, lokho umuntu okumele akwemukele. Ngiyovumela bonke labo abangilandelayo bazi leliqiniso: Labo abangakwazi ukwemukela amazwi Ami ngokugcwele, labo abangakwazi ukwenza amazwi Ami, labo abangakwazi ukuthola inhloso emazwini Ami, kanye nalabo abangakwazi ukuthola insindiso ngenxa yamazwi Ami, yilabo abahlulelwe ngamazwi Ami, futhi, ngaphezu kwalokho, abalahlekelwe yinsindiso Yami kanti nentonga Yami ayisoze yasuka kubo.